विष्णु पौडेलले किन ल्याए आफ्नै पद खारेज हुने यस्तो प्रस्ताव ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
विष्णु पौडेलले किन ल्याए आफ्नै पद खारेज हुने यस्तो प्रस्ताव ?
नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन ललितपुरमा सुरु भएको छ । महाधिवेशमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेको अध्यक्ष मण्डल गठन भएको छ । महाधिवेशनमा उपमहासचिव पद खारेज गर्ने प्रस्ताव भएको छ । नवौं महाधिवेशनमा दुई उपमहासचिव निर्वाचित हुने व्यवस्थाको अभ्यास गरेको एमालेले अव भने उपमहासचिव पद नै नरहने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
रोचक पक्ष त के छ भने विधान मस्यौदाको प्रस्ताव उपमहासचिव विष्णु पौडेल आफै ल्याएका छन् । जवकी उनी आफै उपमहासचिव हुन् । यो प्रस्ताव पारित भएपछि पौडेलको पद खारेज हुनेछ । एमालेको नवौ महाधिवेशनबाट उपमहासचिवमा पौडेलसँगै बैचारिक नेता घनश्याम भुसाल निर्वाचित भएका थिए । विधान अधिवेशनले प्रस्ताव पारित गरे नेकपा एमालेको उपमहासचिव पदमा कोही पनि लड्न पाउने छैन । अर्थात नेकपा एमालेमा अव उपमहासचिव भन्ने पद नै हुने छैन ।
“अध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– ५, महासचिव– १, सचिव–६ र सदस्य– २१२ समेत कुल २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने,” विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीको आकारका विषयमा प्रस्तुत प्रस्तावमा भनिएको छ, “कमिटीका अध्यक्षहरु केन्द्रीय कमिटीका पदेन सदस्य हुनेछन् ।